Home Wararka Qalbi Dhagax oo si caro leh uga jawaabay sawir uu baraha bulshada...
Qalbi Dhagax oo si caro leh uga jawaabay sawir uu baraha bulshada soo geliyay Wasiir Xoosh
Korneyl Cabdikariin Muuse Qalbi dhagax oo ku sugan dalka Jabuuti ugana qeyb galay shir ay soo qabanqaabisay dowladda Jabuuti loogana hadlaayay geeddi socodka siyaasadda geeska Afrika & isdhexgalka ay wadaan dowladaha Itoobiya iyo Eriteriya, ayaa waxa uu kula kulmay siyaasiyiin badan oo shirka ka soo qeyb galay.
Maalintii shalay ahayd mar uu soo dhamaaday shirka ayaa waxa iska soo hor baxay Wasiir Xoosh, wuxuuna salaan u soo taagay Qalbi Dhagax; Qalbi Dhagax ayaa ka cudur daartay salaanta wasiir Xoosh wuxuuna ku yiri “Raggii igu tilmaamay in aan argagixiso & aniga salaan nagama dhexeyso, isagoo ay caro wejigiisa ka muuqato” Wasiir Xoosh ayaa ugu jawaabay “Qalbidhagaxow Aniga ma ahi Farmaajo & Kheyre midkood mana fadhin goobta go’aankaas lagu gaaray, waana kaa raalli gelinaaya, Qalbi Dhaga ayuu madaxa gacanta ka saaray, kuna yiri raalli iga ahow”
Wasiir Xoosh ayaa sawir isaga qaaday isagoo gacanta madaxa u saarayo, wuxuuna soo geliyay baraha bulshada, balse ka been sheegay wixii dhacay sheegayna in “Dowladda Soomaaliya ay raalli gelisay Qalbidhagax”
Qalbi Dhagax ayaa aad uga carooday falkaas been abuurka ah ee ku kaçay Wasiir Xoosh Jibriil, wuxuuna sheegay “Waa nin weyn oo ciyaal suuq ah, kamana fileyn in uu iga been abuuro” Dowlad Soomaaliyeed oo i raalli gelisayna ma jirto.
Wasiir Xoosh oo lagu yaqaan shaqsi aad u anshax xun ayaa isku dayay in uu isaga gado RW Kheyre ido MW. Farmaajo falkaas been abuurka ah balse Qalbi Dhagax ayaa ka biyo diiday oo kadaba tagay beentiisa.
Previous articleSeddex qodob oo lagu heshiiyay kulankii maanta ee xildhibaanada iyo guddoonka BJFS (Akhriso)
Next articleFaarax Macallin “Waa in la dilaa 100 kun oo qof haddii dowladnimo la rabo” (Video)
[Deg Deg] Abaabulka ciidankii gadood ahaa oo sii xoogeystay & Fahad...
Xildhibaanada Galmudug oo mooshin ka keenay Wasiiru dowlade